Talenta sy fitadiavana: tsy mitovy hevitra loatra ny mpampianatra mozika | NewsMada
Talenta sy fitadiavana: tsy mitovy hevitra loatra ny mpampianatra mozika
Manana ny maha izy azy eo amin’ny fanabeazana ny maha olona ny mozika. Amin’ny ankapobeny, tsy zava-baovao ho an’ny Malagasy akory izany fa efa fanaony hatramin’izay. Ny endrika nisehoan’izany no niova nanaraka ny vanim-potoana… Ankehitriny, efa mby eo amin’ny asa fitadiavana ny fampianarana mozika. Efa maro ihany koa ny toeram-pianarana mankasitraka ny fisian’io fampianarana mozika io ao aminy.
Tao anatin’ny folo taona teo ho eo, niroborobo ny fampianarana mozika. Ankoatra ny fisian’ny foibe tantanan’ny fanjakana, efa maro ny toeram-pianarana no ahitana ny taranja fampianarana mozika. Ankoatra ireo, tsy vitsy ihany koa ny mitady mpampianatra mozika hampianatra azy any an-tokantranony. Ireto sokajy fahatelo ireto no ahatarafana fa tsy mifankahazo hevitra ny mpampianatra mozika, amin’ny maha fitadiavana sy fihariana ity asa ity. Na tsy an-karihary aza izany, tazana amin’ny alalan’ny solon-kasina na saram-pianarana alain’ny tsirairay.
Raha mpampianatra no manatona ilay mpianatra any an-tranony, ao ireo mandray solon-kasina na saram-pianarana 16 000 Ar isaky ny mampianatra (ora iray). Ny mpampianatra mozika sasany anefa mandray hatrany 30 000 Ar ka hatramin’ny 50 000 Ar isaky ny adiny iray. Ny hafa indray, latsaka eo anelanelan’ireo. Ankavitsiana kosa ny mihoatra io 50 000 Ar io. Niara-niombom-peo kosa anefa ireto mpampianatra mozika mankany an-tranon’ny mpianatra ireto fa : « saran’ny fianarana io fa tsy saran-dalana. Noho izany, mila mandoa saran-dalan’ilay mpampianatra ihany koa ny mpianatra ampianarina any an-trano ».
Samy manana ny tohan-keviny
Anisan’ny antony tsy mampitovy hevitra ireo mpampianatra mozika manatona mpianatra any an-trano ny fijerena lafin-javatra vitsivitsy. Anisan’izany ny zavamaneno ampianarina, ny toerana na ny fari-piveloman’ilay mpianatra, ny sandan’ny fampianarana omena sy ny fiheveran’ilay mpampianatra ny sanda ananany, sns. « Na eo aza ireo, tsy tokony hifandavitra be kosa ny sarany halaina amin’ny mpianatra mozika hatonina any an-tranony », hoy i Tinarisoa, mpampianatra mozika iray amin’ireo naneho ny heviny. Toa nanamafy izany ny hafa : « satria efa tafiditra ao anatin’ny asa ivelomana izy io, noho izany, tokony hisy hatrany ny fijerena ny maha olona » !
Na izany aza, manana ny fomba fijeriny ihany koa ny mpianatra manoloana ny mpampianatra, hany ka ao ny sahy sy mazoto avy hatrany na somary ambony ihany aza ny sarany. Manantombo kokoa ireo mpampianatra efa manana ny maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny fampianarana mozika. Misy amin’izy ireny rahateo no tsy mionona fotsiny amin’ny fampianarana any an-tsekoly fa tonga manatona any an-tranon’ny mpianatra mihitsy.
Mbola malalaka ihany ny tsena raha…
Efa zary varotra anaty fiarahamonina ny fampianarana mozika. Tsikaritra ihany koa anefa fa mbola malalaka ihany ny tsena raha hain’ny mpampianatra ny misintona mpianatra. Na, raha hain’ny mpampianatra ny mamaly ny filan’ny mpianatra. Na izany aza, anisan’ny sakana iombonan’ny tontolon’ny fampianarana mozika eto Madagasikara ny fahefa-mividin’ny Malagasy. Tsy mbola laharam-pahamehana ho azy loatra ny fahaizana mozika sy ny fitaizana ary ny soa azo avy aminy.